Epp / Etpu / Epo Muchina Fekitori | China Epp / Etpu / Epo Muchina Vagadziri, Vatengesi
EPP chimiro kuumbwa muchina
Solid simbi yekuvaka inogadziriswa neakakwira tembiricha annealing, kupisa kurapwa, pamusoro de-ngura nesandblast uye yakasaswa neanti-inoparadza pendi.
Kudzora sisitimu inotora Japan PLC uye Chirungu yekubata skrini kuitira nyore kushanda uye zvakazara otomatiki kugadzira.
Yakakwira mhando uye yakagadzika michina zvikamu, seGerman Burkert angle-chigaro mavharuvhu.
Simba rekuchengetedza neyakagadzirwa mushe size, pombi mitsara kuti uone kukurumidza kupisa kwemhepo kuwedzera uye kudzikira.
Yepamusoro kuyerera hydraulic dhiraivhi neakaviri hydraulic humburumbira, izvo zvinoita muchina unomhanya zvakatsiga uye nekukiya zvakatsiga.
Iyo muchina inogona kuve yakagadzirirwa neyakavakirwa-mukati yevhavha system, uye zvakare kune mukana wekupinda pakati vacuum system.
Kaviri yekudyisa kamuri yekukurumidza kudyisa kupfupisa iyo kutenderera nguva.
Balance vharafu yekudzikama hwemhepo kutonga.
Yakawedzerwa zinc yakavharwa muchina makumbo akasarudzika kumutengi pakuisa muchina pane yakakosha ivhu.
Makumbo emuchina uye chikuva chakasarudzika.
EPP (Yakawedzerwa Polypropylene)
EPP (Expanded Polypropylene) imhando yepamusoro yekuita crystalline polymer / gasi rinoumbwa nezvinhu, riine basa rayo rakanakisa kuve kukurumidza kukura kwekuchengetedza kwezvakatipoteredza uye zvigadzirwa zvekudzivirira. Main Performance 1.Energy Absorção de :gua: nekuti zvigadzirwa zvePPP zvine yakakosha bubble pore chimiro, inogona kupinza simba kubva kunze zvakanaka, uye inogona anti-kudzvanya chaizvo. 2.Recycling: EPP zvigadzirwa zvakanaka kuchinjika zvinogona kushandiswa kakawanda, kwete nyore kuputswa. Unyanzvi Dhata ...